Mootummaan Maaster Pilaanii Finfinnee hujiirra oolchuuf sochiirra jira, jedha Dr.Mararaan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Maaster Pilaanii Finfinnee hujiirra oolchuuf sochiirra jira, jedha Dr.Mararaan
Ambotti mannii 10,000 oli akka jigu akeekkachiisni laatameera
Maaster Pilaanii Finfinnee isa Oromoo biraa mormiin guddaan mudatee ture mootummaan hujii irra oolchuuf qophii irra jiraachuu isaa Dr.Mararaa Guddinaa VOA tti himaniiru. Maaster Pilaanicha hujii irra oolchuuf mootummaan xumura irra gayuu isaaf wantoonni agarsiisan heddutu jira, jedhu Dr. Mararaan. Filannoo Caamsaa booda mootummaan Maastar Pilaanii Finfinnee hujii irra oolchuudhaaf sochii ciccimoo eegaluu isaati kan himan. Namni kana dhugoomsus muudamuu isaati Dr. Mararaan kan dubbatan.
Akka haasawa Dr. Mararaatti mootummaan Maaster Pilaanicha gara hujiitti jijjiiruudhaaf jecha namoota qe’ee isaanii irraa buqqisaati kan jiru. Namoonni qe’ee isaanii irraa buqqa’an irra jireessi isaani kanniin lafa san irra yeroo dheeraadhaaf jiraataa turaniidha. Namoonni lafa abbaafi akaakilee isaanii irraa akka buqqa’aniif akeekkachiisni itti laatamees jiru.
Magaalota xiyyeeffannaan itti laatame keessaa Ambo, Bishooftuu, Naqamte, Buraayyuufi Bulee Horaa isaan tokko. Naannoo Amboo qofatti, akka ibsa Dr. Mararaatti, manniin naannoo 10,000 ta’u akka jiguuf mootummaan akeekachiisa laateera. Kanniin jiganis heddu ta’uu isaa himaniiru. Namoota manniin irraa jigeefi kanniin akka jigsaniif ajajamaniif mootummaan wanti godhe akka hinjirres Dr. Mararaan Namoo Daandiitti himan. Dhimmi kuni isaaniifi Kongiresii Federaalawa Oromoof hedduu yaachisaa ta’aa dhufuu isaa dubbatu.
Manniin kunniin akka jiganiif mootummaan akka sababaatti kan dhiyeesse seeraan ala ijaaramuu isaniiti. ‘Manniin 10,000,’ jedhu Dr. Mararaan, ‘mootummaan osoo quba hinqabaanne kan ijaaramanii miti.’ Kanaaf sababni mootummaan dhiyeesse kan fudhatama hinqabne ta’uu ibsu Dr. Mararaan.
Maaster Pilaanii Finfinnee akka hujii irra hinoolle godhuufis ta’ee rakkoo ummata irra gayaa jiru hir’isuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaa hanga ammaatti wanti godhaa jiru kan hinjirre ta’uus ibsaniiru, mataan Kongiresii Federaalawa Oromoo.
Faydaan akka heera Itoophiyaatti Nannoon Oromiyaa Finfinnee irraa argachuu malu woggaa 20 boodas hindhugoomne. Sun akkasitti osoo jiru magaalaan Finfinnee gara naannoo Oromiyaatti babal’achuun isii naannicha irra hubaatii diinagdee, siyaasaa, bulchiinsaa, afaaniifi aadaa ni qaqqabsiisa sodaa jechu qabu mormitoonni Maaster Pilaanichaa. Mormii Maaster Pilaanii irratti barattoonni heddu magaalota Amboofi Roobeetti woreegamuuun isanii niyaadatama.
Finfinneefi magaalota naannoo isii gama bu’uura misoomaatiin wolitti hidhuuf dirqamatti magaalonni Naannoo Oromiyaa bulchiinsa Finfinnee jalatti kufuu hinqaban. Magaalonni biyyoota addunyaa heddus hujii misooma isaanii woloon ykn michummaa uumachuun qindeeffatu malee inni tokko isa biraa jalatti kufuudhaanii miti.
Previous articleJireenyatti milkaayuu barbaadduu? Qabxiilee kanniin irratti xiyyeeffachuu hindagatinaa
Next articleKunniin dhugaa hundi keenya beekuu qabnuudha